Ubusongelwa umndeni oqothelwe amadodana - Ilanga News
Home Izindaba Ubusongelwa umndeni oqothelwe amadodana
Ubusongelwa umndeni oqothelwe amadodana
Unina usola ukuthi indaba isuke ngobesengufakazi wenkantolo
ESITHOMBENI kusuka kwesobunxele nguXolani obulawe ngoLwesibili eqeda kufika kubo ebuya ecaleni, uSphamandla obulawe ngoNdasa (March)
esedo-lobheni, uSiyabonga obulawe ekubo no-Andile Ngcamu otholwe edutshulwe wafa eselolini lomndeni ngawo uLwesibili.
KUSOLWA umbango we-hlathi elanikelwa wumasipala emphakathini na-matekisi, kudutshulwa kubulawa izelamani ezine eSigcakini, eRichmond ngoLwesibili emini.
Sisemuncu isimo emndenini wakwaNgcamu ngokudutshulwa kubulawe ngoyaba lwezinhlamvu amadodana amane akhona esegcekeni lakubo ngoLwesibili emini. Kuthiwa badutshulwe nga-babulali abebengazifihlile ebu-sweni ngesikhathi bezohlasela.
Kulesi sigameko kudutshulwe kwabulawa uMnu Siyabonga Ngcamu (33), uMnu Andile Ngca-mu (25), uMnu Xolani Ngcamu noMnu Blondi Simelane (42), oyisihlobo sabo.
ILANGA lithole ukuthi uXolani ubulawa nje, ubesanda kufika kubo ephuma enkantolo ebevele kuyona ngecala lokuzama ukubulala abebhekene nalo.
Kuthiwa ngalo usuku abeyovela ngalo enkantolo, uqale ngokufonela amaphoyisa, wawacela ukuba amphelezele, amgade ngoba enovalo ngempilo yakhe ngenxa yoku-thi kwelinye icala lokubulala, ubewufakazi oqanda ikhanda.
Kuthiwa amaphoyisa amlande kubo, amlandela ngemoto beya enkantolo, icala abelihambele la-hlehlela umhla ka-24 kuNhlangulana (June). Kuthiwa amaphoyisa aphinde amqhuba aze ayomshiya kubo ngezithuba zabo-2 ntamba-ma, abe eseyahamba.
Kuthiwa ufike kubo wama nge-zinyawo, waxoxa nabafowabo aba-fice behleli emnyango, ebalandisa ukuthi icala lihambe kanjani.
Kuthiwa bekungakapheli ngisho imizuzu ewu-30 ebuyile enkantolo, esaxoxa nabafowabo, kwabe seku-hlasela ababulali abafike badedela inhlamvu.
Ngesikhathi kwenzeka lesi siga-meko bekukhona uXolani, uSiyabonga nomzala wabo uBlondi.
Kuthiwa endaweni engamakhi-lomitha amathathu kube sekutho-lakala isidumbu sika-Andile obephume kubo neloli lokusebenza.
Isidumbu sakhe sitholwe ngu-mshayeli wetekisi siselolini lakubo, sinamanxeba amabili okudu-tshulwa esifubeni. Kusolwa ukuthi ababulali baqale badubula babulala u-Andile babe sebedlulela kubo.
ILANGA lithole ngemithombo yalo ukuthi umndeni wakwaNgcamu kunabantu obubanga nawo ihlathi elanikelwa wumasipala emphakathini. Kuthiwa kunama-lungu omphakathi abengakujabu-leli ukuthi umndeni wakwaNgcamu ulanda izingodo kuleli hlathi njengoba ubunawo wonke ama-thuluzi okusebenza abedingeka ehlathini kubalwa namaloli.
Kuthiwa lo mndeni ubusujoyine nomsebenzi wamatekisi athutha umphakathi endaweni. Kuthiwa nakhona kunabantu okungehlanga kahle kubona ukuthi umndeni wa-kwaNgcamu usungene ematekisini, kwabe sekusuka omunye umsi-ndo, baqala babalwisa.
ILANGA lithole ukuthi lesi be-kungesona isigameko sokuqala ukuthi kuhlaselwe umndeni wa-kwaNgcamu. Kuthiwa asewu-7 amalungu omndeni wakwaNgcamu asebulewe.
ILANGA likhulume nonina wa-babulewe, uNkk Mantombi Ngcamu, othi amadodana akhe abulawa nje, abevele ethola izi-nsongo zokubulawa. Uthi ababulali bebelikhipha ngesihloko eloku-thi bafuna ukuqeda ngawo wonke amadodana akhe. Uthi ngoNdasa (March) kwadutshulwa kwabulawa enye indodana yakhe, uSphama-ndla Ngcamu (29), isedolobheni. Uvumile ukuthi uSiyabonga ubu-lawa nje, ubephuma enkantolo ngecala abelihamba.
“Bese kujwayelekile kuSiyabo-nga ukuthi uma ephuma enkantolo ahlaselwe. Kunesigameko okwadutshulwa kwalinyazwa umfowabo omdala uXolani waze walaliswa esibhedlela,” kusho uNkk Ngcamu.
Uyichithile eyokuthi ukubulawa kwabo kuhlangene nombango wa-matekisi, wathi banetekisi elilodwa. Uthi basola ukuthi ukubulawa kwamadodana akhe kuhlobene necala ebelihanjwa yindodana yakhe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol The-mbeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe kuvulwe amacala amane okubulala kanti amaphoyisa asaphenya, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleSilubalubela ukuyodlala e-egypt isilomo se-downs
Next articleSekusemome ngesithembu sabesifazane kuleli